Thwebula PCI-Z 2 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: PCI-Z
I-PCI-Z – isofthiwe yokubonisa ulwazi mayelana namadivayisi we-PCI efakwe kwikhompyutha yomsebenzisi. I-PCI-Z ingathola amadivayisi angaziwa axhunywe ngebhasi le-PCI, le-PCI-E ne-PCI-X. I-utility ihlola uhlelo futhi ithola lonke ulwazi olutholakalayo mayelana namadivayisi we-PCI afana nomkhiqizi, uhlobo lwedivayisi, igama le-serial, umshayeli ofakiwe kanye nokulungiswa okulungile. I-PCI-Z ivuselela njalo i-PCI ID database, ukuze amadivaysi angaziwa ohlelweni angabonwa nge-ID, bese uthole umshayeli ofanele ngokusebenzisa imenyu yokuqukethwe yesofthiwe bese ulungisa amadivaysi anenkinga. I-PCI-Z iqukethe ibha yamathuluzi okuthekelisa idatha, yenza ama-skrini futhi uthumele imilayezo ngembiko eningiliziwe ku-database ejwayelekile ukuze uhlole ukucushwa.
Ukuthola amadivayisi we-PCI angaziwa ohlelweni
Sesha abashayeli ngemenyu yokuqukethwe
Ukubonisa kolwazi oluningiliziwe mayelana namadivayisi
Kuthunyelwa umbiko oningiliziwe ku-database evamile
Amazwana ku PCI-Z
PCI-Z software ehlobene
I-DVD Shrink – isoftware yakhelwe ukudala ama-backups we-DVD. Futhi, isoftware isekela amathuluzi akhethekile wokuthola kabusha amafayela avikelwe ukukopishwa.
G Data Antivirus – isoftware esekela izindlela ezivikelekile zokuphepha nobuchwepheshe bokuziphatha ukuvikela ikhompyutha yakho kumagciwane.